အငြိမ်းစား အဘိုးအိုတစ်ဦး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖောက်ခွဲမှုပြုလုပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေ | Buzzy
အငြိမ်းစား အဘိုးအိုတစ်ဦး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖောက်ခွဲမှုပြုလုပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေ
အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တုန်းက ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို. မြောက်ဖက် မိုင် ၆၀ အကွာက အူဆူနိုမီယာမြို. ပန်းခြံနဲ့ ကားရပ်နားရာနေရာတစ်ခုမှာ ပေါက်ကွဲမှုနှစ်ခု ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၊ ဒုတိယပေါက်ကွဲမှုမှာ ဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်မှ အငြိမ်းစာတပ်ဖွဲ့ဝင် အဘိုးအို သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အောကျတိုဘာလ ၂၃ ရကျနတေု့နျးက ဂပြနျနိုငျငံတိုကြိုမွို. မွောကျဖကျ မိုငျ ၆၀ အကှာက အူဆူနိုမီယာမွို. ပနျးခွံနဲ့ ကားရပျနားရာနရောတဈခုမှာ ပေါကျကှဲမှုနှဈခု ဆကျတိုကျဖွဈပှားခဲ့ပွီး ၊ ဒုတိယပေါကျကှဲမှုမှာ ဂပြနျကာကှယျရေးတပျမှ အငွိမျးစာတပျဖှဲ့ဝငျ အဘိုးအို သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။
ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ အသက် ၇၂ နှစ်အရွယ် ဂျပန်စစ်သားဟောင်းရဲ. ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသေခံဖောက်ခွဲမှု ဖြစ်ကြောင်း NHK သတင်းငှာနက ဆိုပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ. စစ်ဆေးမှုတွေအရ အဖိုးအိုဟာ သေကြောင်းကြံစည်မှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စာရေးသားထားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီဖွဈစဉျဟာ အသကျ ၇၂ နှဈအရှယျ ဂပြနျစဈသားဟောငျးရဲ. ကိုယျ့ကိုကိုယျ အသခေံဖောကျခှဲမှု ဖွဈကွောငျး NHK သတငျးငှာနက ဆိုပါတယျ။ ရဲတပျဖှဲ့ရဲ. စဈဆေးမှုတှအေရ အဖိုးအိုဟာ သကွေောငျးကွံစညျမှုနဲ့ ပတျသတျပွီး စာရေးသားထားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
အဲ့ဒီနေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အသက် ၆၄ နှစ်နဲ့ ၅၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားနှစ်ဦးနဲ့ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ် ။ သတင်းဓါတ်ပုံတွေအရ ကားနှစ်စီးမီးလောင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီနကေ့ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ပေါကျကှဲမှုကွောငျ့ အသကျ ၆၄ နှဈနဲ့ ၅၈ နှဈအရှယျ အမြိုးသားနှဈဦးနဲ့ အသကျ ၁၄ နှဈအရှယျ လူငယျတဈဦး ဒဏျရာရရှိခဲ့ပါတယျ ။ သတငျးဓါတျပုံတှအေရ ကားနှဈစီးမီးလောငျနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေမှု အများဆုံး နိုင်ငံတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ကို လူပေါင်း သုံးသောင်းခန့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဂပြနျနိုငျငံဟာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ သတျသမှေု အမြားဆုံး နိုငျငံတှထေဲက တဈခုဖွဈပွီး တဈနှဈကို လူပေါငျး သုံးသောငျးခနျ့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ သတျသတေယျလို့ သိရပါတယျ ။
Source : Reuters, NHK
မယုံနိုင်စရာ ကောင်းနေတဲ့ တကယ့်အမှန်တရားတွေ
အကြွေးတင်ခံပြီး အသက်၆ဝကနေ အသက်၂ဝအဖြစ်သို့ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
သတို့သမီးရဲ. အဝတ်အစားတွေကို ဧည့်သည်အမျိုးသား နှစ်ဦးက ဝိုင်းချွတ်တာကို ရီမောနေတဲ့ သတို့သားဗီဒီယို ရေပန်းစားနေ
လမ်းမထက်မှာ လဲကျနေတဲ့ ကလေးငယ်ကို ရက်စက်စွာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဖြတ်ကြိတ်ပစ်လိုက်တဲ့ အမျိုးသမီး
လေးရက်အတွင်းမှာ ကြည့်ရှု့သူ ၆သန်းကျော်သွားတဲ့ အခွီဗီဒီယို